Otionbọchị ofufe: gbasaa okwukwe gị | EKPERE NA OZI
Otionbọchị ofufe: gbasaa okwukwe gị
Paolo Tescione	Edere ya November 11, 2020 November 11, 2020
1. Mkpa nke mgbasa nke okwukwe. Site n'inye anyị Oziọma ahụ, Jizọs chọrọ ka a gbasaa n'ụwa niile: Docete omnes gentes, iji kọọrọ ndị mmadụ uru uru mgbapụta ya bara. Ma, olee ọtụtụ nde ndị na-ekpere arụsị, ndị Mohammed, ndị Juu, ndị na-ekweghị ekwe, ndị jụrụ okwukwe ka ga-agbanwe! Ya mere, ole mkpụrụ obi ga-efu na hel! Naghị emere ha ebere? Nweghị ike ịchekwa ma ọ dịkarịa ala otu?
2. Okwukwe ji okwu a na-agbasa. Ikekwe ị bụghị onye ozi ala ọzọ, ma ọ bụ nwanyị nwere okwukwe ịhapụ ịhapụ ndị ọzọ ... Ma n'ụlọ gị, ị gaghị enwe ike ime ka ụfọdụ ndị na-ekweghị ekwe ma ọ bụ onye na-enweghị mmasị kwenye na ụfọdụ njehie megide okwukwe ahụ? Ọ̀ bụ na ọ gaghị ekwe gị omume izi mmadụ ihe, onye na-amaghị ihe n'okwukwe, ma ọ bụ jiri nwayọọ gbazie ndị ọzọ? Ọ dịghịrị gị mfe ịgba onye ọbụla ume isonye na Work of Propagation of the Faith ma ọ bụ Mgbasa Ozi Ala Ọzọ? Ma ọ bụrụ n’anyị enweghị ike ime karịa, kpee ekpere maka ndị mgbasa oziọma ahụ ka i wee kwadoo ha.
3. Okwukwe ji onyinye agbasa. Mgbe ọ bụla ị nyere aka, jiri ego, ụlọ akwụkwọ, ụlọ, ụlọ akwụkwọ maka ụmụaka dara ogbenye, ị na-agbasa okwukwe n'etiti ha. Site na ijikọ onwe gị na Holy Childhood, ma ọ bụ ọrụ dị nsọ nke Propagation of the Faith, na lira otu izu, ị na-akwado Baptism nke ọtụtụ puku ụmụaka, ị na-enyere ndị mgbasa ozi ala ọzọ aka, ibuga ha n'etiti ndị na-ekweghị ekwe, wuo ụka ha, ya mere na-enyere ọtụtụ puku aka mkpụrụ obi ịzọpụta onwe ha. You na-akpakọrịta ya? Ọ dịkarịa ala ị na-enye onyinye na ụbọchị ozi?
OMUME. - Pater atọ na Ave maka ntụgharị nke ndị na-ekweghị ekwe. Soro ụfọdụ ụlọ ọrụ na-akpakọrịta maka ịgbasa okwukwe.
Nke gara aga Post Gara aga post:Na-atụgharị uche taa n'otú ị si ele ịdị mma Chineke anya
Next Post → Post ozo:Akụkọ mkparị nke McCarrick Report banyere nzukọ KGB na arịrịọ FBI